Vumelana ngevesti - Imfashini Yamadoda enesitayela | Amadoda aSitayela
Ivesti isiphenduke ingubo yezinguquko uma kukhulunywa ngokugqoka kahle. Isudi ayinakushoda ekhabethe lomuntu, futhi isudi ngeke lehluleke ukugqokwa ngaphandle kwevesti. Le ngubo iya ngokuya ivame ukubonakala kuzo zonke izinhlobo zemicimbi, umkhwenyana akakwazanga ukuphuthelwa ngaphandle kwesudi yakhe enevesti, kepha kulezi zinsuku ungagqoka njengesivakashi noma kunoma iyiphi ingubo.
Ukubukeka kwamavesti sekubuye kwaba semfashinini, Baphinde basiguqula isitayela nendlela yokugqoka kwamadoda. Ngakho-ke, sigxila kulolu hlobo lwengubo nokuthi singaluhlanganisa kanjani kahle nesudi. Isitayela somqeqeshi webhola laseNgilandi (uGareth Southgate) sisizile ekuqhubeni umkhuba wokugqoka kabusha futhi sikhombisile ukuthi usengakwazi ukugqoka kahle noma ungasebenzisi imali eningi.
1 Kufanele igqokwe kanjani ivesti?
2 Lapho ungagqoki ivesti yesitayela?
3 Inhlanganisela yombala
Kufanele igqokwe kanjani ivesti?
Ngaphandle kokungabaza, ivesti lifana nokunikeza okusemthethweni isethi yezingubo. Inikeza lokho kuthinta kokujula ekubukekeni kwakho futhi kuvame ukugqokwa ngaphansi kwejakhethi yesudi. Uma ufuna ukubheja komunye wemikhiqizo engcono kakhulu esinayo Thom sweeney lapho ungabona khona amasethi abo wevesti enesudi, enezindwangu ezinhle nokusikeka okuhle.
Umkhiqizo wezingubo Amamaki & Spencer futhi kukhuphule ukuthengisa kwayo eminyakeni yamuva ngokukhuthaza isitayela esihle sokugqoka ngaphandle kokusebenzisa isabelomali esikhulu. Umfutho wakhe wanikezwa ngumqeqeshi webhola laseNgilandi njengoba sishilo ngenhla.
Ukugcwalisa isitayela sakho esihle kufanele ugqoke izingcezu ezintathu ngokusika I-Slim Fit, nezingubo ziqoshwe ngokuphelele, zibekwe kahle zahlelwa, ngaphandle kokungayinaki leyo vesti ehambisaniswe kahle nokugcina ihembe nothayi kuqondile.
Ngokuningiliziwe kufanele kugcizelelwe lokho ivesti kufanele ilingane kahle, ngosayizi ofanele, ayikhululekile kakhulu lapho yenza isikhwama sivele ngaphesheya kwesifuba, hhayi ukuqina kakhulu ukuyenza ibukeke njenge-corset.
Inani lezinkinobho lizoya ngokuthi uzoligqoka ngokwethukela noma cha. Uma ukhetha ivesti enezinkinobho eziningi, ukugqoka ngendlela efanele. Uma ufuna ukugqoka ivesti ungavulile izinkinobho, kungcono ube nezinkinobho ezi-3 noma ngaphansi.
Ivesti kufanele igqoke isikhathi eside, ukuthi kufanele imboze okhalweni, ngakho-ke, lapho uthenga eyodwa kufanele ifane nokuphakama komuntu. Kuhle ukuthi ngiyazi vula inkinobho yokugcina ebhantshini ezansi, yingakho kufanele ifane nobude bevesti futhi ikhombise ihembe elincane.
Ama-armholes wevesti kufanele abanzi ukuze ukuhamba kwezingalo kwenziwe ngaphandle kobunzima. Ngemuva kufanele kufakwe ulayini futhi Indwangu eyenziwe ngosilika noma okuthile okungasindi, ukuze ingalinganisi ukwakheka kwezinto zayo futhi ilula kakhulu. Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo lwendwangu ethambile futhi eshelelayo luzokwenza ijakhethi oyigqokayo ingashelela kangcono kakhulu ngokuhamba ngakunye.
Lapho ungagqoki ivesti yesitayela?
Lezi zinhlobo zezinkomba zibalulekile ukuzazi ukuze ungaweli enhlanganisweni engaphelele, zombili nezinye izinhlobo zezingubo noma ngesudi enhle:
Uma kwenzeka akukhuthazwa ukugqoka amavesti ngamajini. Azibukeki zizinhle nezinye izinhlobo zamabhulukwe ezingagqokiwe, yize ungazama ukulenza libe nobuhle.
Akubukeki kahle ngezikhindi noma izikhindi ze-bermuda, lokho akuvunyelwe ngokuphelele.
Amahembe anephethini awabukeki kahleKunconywa amahembe angenalutho.
Akunconyiwe futhi gqoka ibhande ebhulukweni lakho uma uzogqoka ivesti. Ukuyigqoka kusho ukuthi kwenziwa amafolda angenasidingo futhi ngeke isitayela sakho sihle.
Imibala akufanele futhi iqhathanise kakhulu phakathi kwejakhethi, ibhulukwe nevesti. Akunconywa ukusebenzisa imibala ye-chromatic yethoni eqinile, isibonelo, obomvu nokuhlaza okotshani noma opinki noluhlaza okwesibhakabhaka. Izesekeli ezinjengezibopho zingagqama ngombala ogqamile, izonikeza isudi elinye ithoni.
Amavesti amnyama ahamba kahle cishe nayo yonke into. Ibalulekile ekhabethe lakho ngoba ihlukahluka kakhulu, ihlangana kahle namasudi wamathoni angathathi hlangothi, enamahembe amhlophe futhi nohlobo oluthile lwephethini. Izicathulo kumele zihlangane nombala omnyama ofanayo futhi izesekeli lapha zingathatha isigaba esiphakathi futhi zibe ukuncoma okungakahleleki.
Izambatho ze-Navy blue nazo zinikeza lokho kubukeka kobuhle futhi ahleleke kakhulu kunalawo amnyama. Zihamba kangcono kunanini ngaphambili ngamahembe amhlophe nothayi omkhulu. Futhi ukwenza ukushaya okungcono, amahembe aluhlaza okwesibhakabhaka nezinye izingubo ezingamathoni ampunga zenza inhlanganisela ephelele.
Amavesti empunga angakha inhlanganisela yoqobo nengahambelani. Kungcono ukuyisebenzisa ngamasudi aluhlaza okwesibhakabhaka nehembe elimhlophe. Uthayi ungaba umbala ogqame ngokwengeziwe wokugqashula lokho kubukeka okudala, njengezicathulo ze-burgundy ezibomvu nezimnyama noma ezinsundu.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Vumelana ngevesti
10 Imibono Yesipho Kubathandi Bemvelo